Ubuntu inogona kunge iri Rolling Kuburitswa pakati peLTS shanduro | Kubva kuLinux
Nhau dzandinokuunzira dzinomhanya semoto wemoto pawebhu, uye ndizvozvo kana zvasvika kune Ubuntu midhiya mhedzisiro inoonekwa pane zvimwe zvasara. Asi ini ndinokusiira mamwe maonero angu pane izvi.
Kana tikazviona kubva pachinzvimbo chevashandisi, zvese zvingave zvakanaka. Iko mukana wekutanga "vhezheni itsva ye Ubuntu»Makore maviri ega ega, nguva yakareba zvakakwana kuti usafanirwe kumanikidza PC yedu uye uwane kugadzikana mupfungwa iyoyo.
Mukufamba kwenguva iyoyo, isu taizoenderera nekugamuchira zvigadziriso kubva ku Kernel kana mamwe mapurogiramu atinowanzoshandisa, kutevedzera izwi rekuti Kutenderera Kuburitswa. Uye kusvika ipapo zvese chaizvo, zvakanaka kwazvo.
Kune rimwe divi, hapana kana chinhu chakave chakatsanangurwa nezve iyi pfungwa uye ini handizive kana Canonical (zvirinani kutaurwa kuna Sekuru Maka) iwe unofarira zano, kana vese avo vano "invest" mukuparadzira uku, nekuti zvakajeka kusimudzira kwekubuda kwe Ubuntu iyo yatinowanzoona yega mwedzi mitanhatu.
Ini ndinofunga kuti pamusoro pezvo, izvi zvinogona kuve nechimwe chikonzero kumashure chakanangana ne Ubuntu Runhare OS. Ini handifunge kuti zviri nyore kutsungirira kuvandudzwa uye kuburitswa kutenderera pakati peshanduro dzePC neMobile editions, uye kuva nemakore maviri pakati nepakati pekugadziriswa, nekuti basa racho rinenge risinganetsi.
Asi iwo angori maonero angu uye pamwe ndiri kutaura goko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu inogona kunge iri Rolling Kuburitswa pakati peLTS shanduro
Ndiri kufara hehe, ndichiri kubheja paubuntu pamusoro pemamwe ma distros uye ndinofunga zvingave zvakanakisa.
Ndiri kutonyanya kufara neArch, fungidzira iwe uine Ubuntu Rolling - ingo gadziridza Kubatana zvishoma, izvo zvandinofunga zvakanaka. Mune maonero angu zvingave zvakadzikama kupfuura iyo yazvino poindi kuburitswa, zvingave zvinonakidza kuona Canonical ichiisa mapakeji kune chingave Chiyedzo uyezve ku Main. Ini ndinofunga kuti izvi zvinokwidziridza iyo Ubuntu yekuisa quota.
Kana isu tichitaura nezve desktops, kazhinji ini ndaishandisa xfce uye lxde, ikozvino ini ndinoshandisa kde uye iyo yekubatana sezvo chero distro yakashata.
Ndine Kubatana pabvunzo yangu Archlinux, uye inoshanda mushe ...
Izvo zvakanaka kuti uzive, rimwe zuva ndinofanira kushandisa kubatana kweinopfuura mwedzi mumwe hehe.
Iyo yakanaka poindi yaunotaura nezve iro basa rekuita, kana uine distro yatove pairi yega yega mwedzi mitanhatu basa risati rapera 6% kupora, zvinozonyanya kana vakawedzera rimwe basa senge kudiwa kweiyo Ubuntu foni.
Panyaya yekushambadzira, vanofanirwa kana vachida kuparadzira iyo ditro yakatsaurirwa chete kune iyo foni foni, nekuti kana vakaita basa rakakura, mutengi wekupedzisira, achigutsikana nekuita kwefoni mbozha, anobva abheja nekuisa Linux pakombuta yavo.
Asi kana vakakundikana uye vatengi vakawana zvinokanganisa, saka taura zvakanaka nekuunza vateveri kuti vashandise mahara software. Ivo vaizowana yakaipa pfungwa yeiyo linux iri, uye ese ma distros achabhadhara imwe chete.
(Ramba uchifunga kuti vanhu vazhinji vanoshandisa Windows kunyangwe vaine chiuru chematambudziko pamakomputa avo, unotoziva chirevo: "zviri nani kuzivikanwa zvakaipa pane zvakanaka kuziva")
Ini ndinongovimba ivo vanoita zvakanaka neiyi projekiti uye saka nyika ye linux inozivikanwa kune vamwe vanhu vazhinji.
Ini ndinoda iyo pfungwa musimboti, ndinofunga chimwe chinhu icho Cannonical akaisa parutivi uye akabhadhara mutengo wayo. Mhando yeLTS yakanaka kwazvo uye yakagadzikana, ichipa bhizinesi chikamu chinosarudzika (kana zvisiri Red Hat chete uye Novell yekutarisa). Android neIOS ndiwo madzimambo saka basa rechikwata cheCannonical richava rakaoma, saka ndinoona zvichikwanisika kuti vachatarisa kuLTS nekuvandudzwa mwedzi yese mitanhatu. Zvakanaka ndizvo zvandiri kufunga uye kunyangwe ini ndisingashandise iyi distro, ndinovimba vachabudirira kwazvo.
«... nguva yakareba zvakakwana kuti tisafanirwe kumanikidza PC yedu uye kuwana kugadzikana mupfungwa iyoyo.»
Zvakanaka, hachisi chisungo chekuisa iyo nyowani vhezheni yeUbuntu pakati peimwe neLTS, unogona kuenderera nayo kusvikira inotevera ichibuda ... uye nhasi rutsigiro rwuchasvika 2 LTS.
Mbeu dzinoramba dzichivandudzwa uye yakawanda software, izvo zvisingashanduke idesktop uye software inoenderana nazvo.
Ini handioni zviri kure kure mukana wekuita izvi, uye kuburitsa software kana yagadzirira, uye kwete kumhanyisa kuburitsa vhezheni yega yega mwedzi mitanhatu.
Pane zvinhu zvakawandisa zvaunofanira kufunga kana uchida kuita izvi kuCanonical. Pfungwa iyi haina kushata zvachose, uyezve ichave iri mukana wakachena kune vashandisi kana zvaitwa zvakanaka.
Rangarira kuti kuita kernel shanduko haisi nguva dzose iri yakanakisa maererano nechairo dhiraivha uye matambudziko aanogona kukonzera pamatanho mazhinji ekushandisa; zvinogoneka, asi zvinofanirwa kuitwa nemazvo.
Zvakanaka, zvingave zvakakodzera, yakagadzikana imwe (LTS) uye kumwe kuyedzwa kana sid (Kutenderera)
Hmmm, ini handina kumbobvira ndanzwisisa izvo nezveDebian Squeeze, Wheezy naSid, mumwe munhu anogona kunditsanangurira ini?
Debian kusvina izita rebazi razvino rakagadzikana (Debian 6).
Wheezy izita rebazi razvino rekuyedza (iro remangwana rakagadzikana bazi, ndokuti: Debian Wheezy ndiDebian 7)
Uye sid ibazi risina kugadzikana
Ahhh kare. Icho ndechimwe chezvinhu iwe chausingazive asi iwe unoverenga kazhinji kazhinji uye usati wambokupa iwe kuti ubvunze zvazvinoreva. Thanks 🙂
Zvinonakidza, ndinoshamisika kuti chii chepuraimari uye chemindi chingaite ipapo.
ndinovimba shandura base.
kunyangwe ivo vachiri kugona kuita izvo timu yeManjaro
Huye, yekutanga inovimba zvachose paLTS, pamwe nekuwedzera yayo software.
Mint zvakafanana, chete kuti iwo maBhaibheri haachazovazve mwedzi yese mitanhatu, kutanga kubva 6 ivo vaizoburitsa 14.04, uye kubva ipapo 17 apo Ubuntu 18 inobuda ...... kana kumisa zvinhu uye tora yako wega nzira sezvawakaita Ubuntu, iyo kunyangwe ichiri kubva paDebian, ine rusununguko rwakawanda zvese musoftware uye mune zvinyorwa.
Ini pachangu, ini ndinoshuvira kuti kugovera kuve kweRolling Release, saka isu tichagara tichigadziridza sisitimu neshanduro dzazvino dzese dzezvinhu zvatakaisa uye kwete kumirira mwedzi mitanhatu kuti uwane zvizere
Canonical yaizokunda mune shoma basa. Dambudziko mu kernel 3.xx, -xx, kozotevera zvinotevera. Haufanire kunetsekana nekukochekera chero chinhu, unongotora rese rekuvandudza basa kune vamwe
Usaite chikanganiso, iyo Rolling fomula yakasununguka kune avo vanochengeta iyo distros.
@Elav handifunge kuti izvi zvinogona kukanganisa kukwidziridzwa. Ubuntu yakagadziriswa izvozvi, uye kusimudzira kwakanyanya kwavanogona kuve nako iko zvino ndiko kuwedzera uye kwakanyanya kunyorera kunyorera kweUbuntu nemakomputa ane pre-kuisirwa kuoneka. Kana iwe ukasatarisa kuMicrosoft, iyo isingade kuisa Windows yega mwedzi mitanhatu kuti ivepo.Ndinofunga kuti kushambadzira kunofanirwa kuenda kumwe kunhu.
Ini ndinojekesa kuti ini ndinotaura kunyorera kweUbuntu neiyo brand, ndinodaro, kuitira kuti pasave nemunhu anofunga kuti ini ndinofunga kuti Linux ndiUbuntu.
Ini handinzwisise zvakawanda zveizvi asi kana iine makore maviri ekuburitsa kutenderera haisi kutenderera. Maona? -> Iine mahedheni ekuburitsa, akareba asi anoita.
Kwete chaizvo .. Iwe waizogara uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wabuda. Ndokunge, hazvina kuita usati wavandudza kubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe, waifanira kurodha pasi 1GB yemapakeji ..
Izvo zvaive zvatouya.
pakupedzisira mu ubuntu ivo vari kufunga chimwe chinhu chaizvo, ndinoreva, arch 😀
Pindura kuna Helena
Kopa repo kune debian uye ikozvino kusunungura kutenderera. Ah Wannabes ..
Nezve nyaya yemadhiraivha emifananidzo, muenzaniso wakanakisa wekuita izvi nenzira yakanaka chirongwa cheChakra, ndine nvidia yakabatana uye kana kernel yakagadziridzwa, mutyairi neiyo xorg yayo yakagadziridzwa kuitira kuti irege tsvaga kusawirirana matambudziko.
Kana vakaita izvo havazove nemutambo, uye pachangu ini ndasarudza kushandisa rolling distros, sezvo ndichifanira kugadzirisa yega yega 6, 8 kana 9 mwedzi kunyangwe gore rimwe hazviite kwandiri.
Izvo zvatove kuzivikanwa kuti Rolling Release Rulez, rimwe zuva masisitimu ese anozopedzisira awira pasi peiyo modhi kana pasi peiyo semi-rolling. Naizvozvi, Ubuntu ingangoda iyo AUR-mhando mushandisi repository kuti isave zvichienderana nePPAs, uye pamwe zvinogona kudaro pedyo Nhanho yeArch.
Sekutaura kwa @nano
Iri izano rakanaka asi rinofanirwa kuitwa nemazvo uye ndinofungidzira Ubuntu ingadai yakagadzikana nenzira iyoyo.
Ini ndinofungidzira kuti vanasikana ve ubuntu vangatora nzira imwechete kana ubuntu ikatora nzira inotenderera yekuburitsa.
Yakachengeteka uye Arch ichaburitsa dzakagadzikana shanduro lts
Pindura kune deviltroll